China Aluminium SOLID PANEL mveliso kunye nabathengisi | Alucosun
IPHEPHA ELIQINILEYO LEALUMINUM
I-Alucosun SOLID® yiAluminium Solid epeyintwe kwangaphambili kwiiphaneli zealloys ezinkulu zealuminium ezinobunzima obahlukeneyo kunye nokukhetha okulungele ulungelelwaniso olungaphezulu, uphahla, ukufakwa kwesilingi. Ithathwa njengenye yezona zinto zihlala ixesha elide, ezikhuselekileyo, ezoqoqosho kunye nobuhle obufumanekayo kule mihla.
I-Alucosun SOLID ® ihlelwa njengeCandelo le-A1 elikhuselweyo loMlilo elivavanywe ngokuchasene ne-EN13501 kunye nokuqina kwayo okuchaphazeleka kwiipropathi zokutyabeka ze-PVDF ezinoluhlu olubanzi lwemibala kwaye igqibezela iisuti kwizicelo ezahlukeneyo.
I-Alucosun SOLID®I-Aluminium Solid ipeyintwe kwangaphambili kwiiphaneli zealloys ezinkulu zealuminiyamu ezinobunzima obahlukeneyo kunye nokukhetha okulungele i-façade, uphahla, ukufaka isilingi. Ithathwa njengenye yezona zinto zihlala ixesha elide, ezikhuselekileyo, ezoqoqosho kunye nobuhlobo obukhoyo kwezi ntsuku.
I-Alucosun SOLID ® Ihlelwe njengeCandelo A1 lomlilo elikhuselweyo elicikidekileyo elivavanywe ngokuchasene ne-EN13501 kunye nokuqina kwayo okuchaphazeleka kwiipropathi zokutyabeka ze-PVDF ezinoluhlu olubanzi lwemibala kwaye igqibezela iisuti kwizicelo ezahlukeneyo.
Inkcazo Uluhlu Umgangatho
Iphaneli ubukhulu 2-5mm 2mm, 3mm
Uhlobo lweAlloy I-AA 1000, i-AA 3003, i-AA 5052 IAA 1100, iAA 3003
Ubunzima 8.2kg / m2 ye3mm
Ububanzi (mm) 0 ukuya -0.4mm
Umahluko wokudibanisa umgca (mm) Mm5mm
Ukuchaneka komphetho (mm ≤1mm
Iimpawu zoMatshini kunye nezoMzimba
Uqine Ultimate I-185 MPa
Uvelwano oluqinileyo I-165 MPa
Ubungakanani @ Break 1-4%
Iimodyuli zoLungelelwaniso I-68.9 GPa
Umchebi weModyuli 25 GPa
Amandla ocheba I-110 MPa
Ukuqhuba kobushushu 154 W / mk
Indawo yokunyibilika 643 - 654 C
Amaqondo obushushu Ngo-413 C
Ubunzima obuthile 2.73 G / C.
Ukutyabeka okuqinileyo kweAluminiyam Pvdf
S. Hayi Iparameters Iyunithi Umgangatho wovavanyo Iziphumo
1 Uhlobo Ukwaleka - - I-PVDF esekwe kwi-fluorocarbon yokugquma 15-20
2 Ukwaleka iwaranti - - 15-20 yrs
3 Gloss @ 60 isidanga % I-ASTM D 523 20-80
4 Ukuqina (T-bend) T I-ASTM D1737-62 2T, akukho kuqhekeka
5 Impembelelo eguqulweyo- ukunqamleza - I-NCCA II-5 Akukho ukukhetha
6 Ukuqina-ipensile imiz I-ASTM D3363 Min
7 Adhesion Amanzi abilayo abilayo - I-ASTM D3359, indlela 8 37.8 ° C, iiyure ezingama-24. 100 ° C, imizuzu engama-20. Akukho ukukhetha ngaphandle Ukukhetha akukho kukhetha
8 Ukumelana esirhabaxa iilitha / mil I-ASTM D968-93 (Isanti ewayo) 40
9 Ukuchasana neMichiza - I-ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 AAMA2605 ASTM D2248-93 Akukho tshintsho
I-10% HCL (Uvavanyo lweMizuzu eli-15 yoVavanyo)
20% H2SO4 Iiyure ezingama-72
Iipesenti ezingama-20 ze-NaOH 18 iiyure
Mortar Pat uvavanyo Iiyure ezingama-24
Isicoci, isisombululo se-3%, i-38ºC, i-72hrs
10 Uvavanyo lwemozulu-o-mitha - Ubukhulu. Iiyunithi ezi-5 emva kweminyaka eli-10
Ukugcinwa kombala I-ASTM D2244-93 Yi-50% emva kweminyaka eli-10
Ukugcinwa kwamagama I-ASTM D523-89 Ubukhulu. Iiyunithi ezi-8 zemibala kunye nee-6
Ukuxhathisa itshokhwe Mhlophe emva kweminyaka eli-10
11 Ukuxhathisa ngetyuwa Iiyure I-ASTM B117-90 Blister-10, unobhala-8, emva kwama-4000
hrs, 35 ° C inkungu yetyuwa
12 Ukuxhathisa ukufuma Iiyure I-ASTM D2247-94 Akukho blister Emva kwama-4000 hrs, 100% RH, 38 ° C
I-Alucosun SOLID® kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN13501 ifakwe kwiklasi ye-A1 eyimveliso engatshiyo ngokwenyani. Ngokuhambelana nekhowudi yokhuseleko lobomi yeNFPA kunye nabasemagunyeni abahlukeneyo abalawulayo ukungabinakho ukutsha kuvunyelwe kulo lonke uhlobo lwesakhiwo ngaphandle kwesithintelo. Kule meko, i-AlucosunSOLID ®ngeklasi A1 inokufakwa kwizakhiwo zalo naluphi na ubude kunye nohlobo.
Into yokuvavanya Iziphumo
EN13501-1 Iklasi A1
I-Aluminium ithathwa njengeyona nto isetyenziswayo kwakhona; simahla kukhukuliseko lwentsimbi enzima. I-Aluminium inokuphinda isetyenziswe kwakhona ngaphandle kokwahluka komgangatho. I-aluminium e-Recycled ayinakucaciswa kwi-aluminium enyulu, inkqubo ayivelisi lutshintsho kwisinyithi, ke i-aluminium inokuphinda isetyenziswe kwakhona ngokungenasiphelo. Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona i-aluminium konga iipesenti ezingama-95 zeendleko zamandla zokulungisa ialuminium entsha.
Imibala esetyenziswe kwinkqubo yepeyinti ngexesha lokuveliswa kwe-Alucosun Solid ®ayinabungozi. Ngelixa ukugquma iiphaneli eziqinileyo itekhnoloji esetyenziselwa ukuqhubekeka evumela ukuba izinyibilikisi ezikhutshwe kwiipeyinti ziyacinywa kwaye zibuyiselwe kwinkqubo.
I-Alucosun SOLID®umphezulu ugqityiwe nge-PVDF kunye nenkqubo yepeyinti yeNano kwinkqubo yokufaka i-coil eqhubekayo eqinisekisa umgangatho kunye nokuhambelana ngokuhambelana nemigaqo ye-AAMA 2605. Imibala eqinileyo ngokubanzi ziingubo ezimbini (26 +/- 1 µm) ngelixa isinyithi siziingubo ezintathu (3) (32 +/- 1 µm).
Inkqubo yepeyinti equlathe ubuncinci be-70% ye-PVDF resin yaziwa ngokunganyangeki kwimitha ye-UV kunye nefuthe lokusingqongileyo, ngenxa yoko i-Alucosun SOLID ® ukusebenza okuzinzileyo nokungaguquguquki kwiimeko zemozulu ezibi kakhulu.
Inkqubo ibonelela ngebhokisi yencoko eyongezelelweyo ecacileyo enezinto ezinqamleza umnqamlezo weNano kwisiphelo sePVDF; eqinisekisa umphezulu ogudileyo. Umphezulu ogudileyo kunye nocacileyo wenza ukungcola nothuli kubambelele ekunikezeleni kweso sakhiwo ukujonga okucocekileyo. INano PVDF yinkqubo yokupeyinta yokuzicoca.
PVDF kunye neNANO
Inkqubo yepeyinti iqinisekisa kakhulu iminyaka eli-15 ukuya kwengama-20 yokugqiba iwaranti.
Iiphaneli ezineendlela ezahlukeneyo zokugqiba ziyafumaneka kwi-Alucosun SOLID ® nangona kunjalo ixhomekeke kwixesha elithile kunye nobungakanani bemida. Ngokwemvelo ikhuselwe ngumaleko we-SODID weepaneli ezi-SOLID zihlala zikhuselekile kakhulu kunika iwaranti malunga neminyaka engama-30.
Zonke iindlela eziqhelekileyo neziqhelekileyo zangoku zokufakwa kweeFadade zinokwamkelwa kufakelo lweepaneli ezi-SOLID. Olunye ukhetho lokulungiswa okufihliweyo lwenza lwahluke kwiimveliso zekhonkco zokudibanisa. Naziphi na iimilo zekhonkrithi, i-convex, ikona, ukugquma ikholamu, i-softs, i-canopy njl. Ukuze ufumane ulwandiso olufanayo lwe-thermal kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe isakhelo esenziwe ngeAluminiyam. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iiphaneli ekusebenziseni kube kanye nakulungelelwaniso olufanayo lokulungisa ukugqiba okuhle.
I-Alucosun SOLID® iveliswa ngocingo olucekeceke lwe-lacquer kwicala elingasemva lokuqinisekisa ukudibana okuqinileyo nezixhobo zokubambelela ke ngoko inokudityaniswa ngokuthe ngqo kwisakhiwo ngaphandle kokufumana into ebonakalayo yokulungisa.
Iiphaneli zobunzima be-3 mm nangaphezulu zikhuselekile kwi-weld (ISO 14555: 2017) eneebhawudi zestudi ngasemva kwepaneli yokulungiswa okufihliweyo. I-alloy 3003 kunye ne-5005 esetyenziselwa iiphaneli zilungele ukuwelda. Ukwenziwa kwentsimbi kwicala elingasemva leepaneli nge-3 mm nangaphezulu akunakwenza mpembelelo kumphezulu ogqityiweyo.
Alucosun ® Iphulo leWis om Metal Composites Ltd elivelisa iimveliso eziphambili ngentsebenziswano neziko lethu lemveliso elibhiyozelweyo ebeliseJiangsu, liphakamisa malunga nama-ades amabini anamava atyebileyo kwi-Aluminium Panel Industry.
Alucosun ®uphawu olunika zonke iimfuno zepaneli yoyilo, nokuba yiFacade, uphahla, isilingi, ukuthengisa, isazisi esidibeneyo. Ukuxhotyiswa ngawo onke amancedo asendlini ukuqinisekisa imveliso esemgangathweni kunye nokuzibophelela ngokuhambisa.
Sinikezela ngeyona mveliso intle nge-tepfection; kufezekiswe ngumxube ofanelekileyo weengcali zeshishini, itekhnoloji yakutshanje kunye noomatshini abaphucukileyo.
Indawo esekwe ukuvelisa ngaphezulu kwe-10 yezigidi M2 ngonyaka, kunye nezityalo ezintathu (3) zemveliso eyahlukeneyo yePaneli, ukuDibanisa imibala kunye neLebhu yangaphakathi eXhotyiswe.
Alucosun ®isebenza kwiMpuma Ekude, kuMbindi Mpuma, eYurophu naseMelika. Iiofisi zethu zommandla, oogxa bethu kwezorhwebo, iiarhente kunye nabasasazi kuwo wonke ummandla basivumela ukuba sihlangabezane neemfuno zakho zezinto zokwakha kunye neenkonzo zenkxaso naphina apho ufuna khona.
Egqithileyo I-Alucosun PE
Iphaneli eQinisekileyo yeAluminiyam
Iphaneli yeSolid Metal Fence